Taariikh Nololeedkii Allaha u Xaxariiste Marxuum Cabdi Xassan Buuni, Wasiirkii Hore Xidhiidhka Goayaasha Somaliland « SAWNEWS NETWORK
« Taliska Ciidanka Amniga Oo Demiyey Xiisad Ka Dhalatay Maamulka Biyaha Magaalada Boon
Madaxweyne Rayaale oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalda Burco »
Taariikh Nololeedkii Allaha u Xaxariiste Marxuum Cabdi Xassan Buuni, Wasiirkii Hore Xidhiidhka Goayaasha Somaliland
Hargeysa, (Sawnews/harowo) – Sida aad la wada socotaan waxaa habeenkii xalay magaalada London ee Xarunta dalka Ingiriiska ku Geeriyooday Rabi Naxariistii jano hawgu deeqee Wasiirkii Wasaaradda Xidhiidhka Golayaasha Somaliland Marxuum Cabdi Xassan Buuni, oo mudo dhawr todobaad ah Magaaladda London kaga jiray Cusbitaal lagaga dawaynayay xanuun dhinaca wadnaha kaga soo booday.
Hadaba Md. Cabdi Xassan Buuni, oo mudo dheer ku jiray Siyaasada iyo ka qayb qaadashada horumarka dalka, waxa uu ahaa shakhsi leh taariikh dheer isla markaana dalka ka soo qabtay xilal kala duwan, hadaba iyadoon la soo koobi karayn taariikhda balaadhan ee marxuumka waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qayb kooban oo guud mar u ah taariikhdii marxuumka.
Waxaa 02-dii Bishan juun ee aynu ku jirno ku geeriyooday Magaaladda London Wasiirkii Wasaaradda Xidhiidhka Golayaasha Somaliland Marxuum Cabdi Xassan Buuni, oo ka mid ahaa duqayda iyo siyaasiyiinta waaweyn ee Somaliland, sida wayn looga yaqaan. Hadab Marxuum Cabdi Xassan Buuni oo Mudo dheer ku soo jiray Siyaasada iyo arimaha bulshada ee Dalkeena, waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qayb kooban oo taariikh nololeedkiisi ku saabsan.
Allaha u Naxariistee waxa uu Marxuum Cabdi Xassan Buuni ku Dhashay Magaaladda Boorama ee Xarunta Gobolka Awdal taariikhdu markay ahayd 1935-kii, dhinaca waxbarashadiisi aasaasiga ahayd waxa uu Dugsiga Hoose ka galay Elementary School ee Magaalada Boorama, sanadkii 1946-kii, sanadkii 1948-kii, waxa uu Dugsigiisi dhexe ka galay Magaalada Sheekh.
Sanadkii 1953-kii waxa uu magaalada Caddan ku qaatay koorso Maamulka iyo maaraynta ah, taas oo uu dhiganayay mudo sagaal bilood ah, sanadkii 1958-kii Passed Clericcal qualifying Examination promoted 3D Clerk.
Shaqooyinkii uu Marxuumku soo qabtay, waxaa ka mid ahaa Sanadihii 1954 ilaa 1956-kii waxa uu ku biiray ciidamadii Mustacmaradii Ingiriiska ee Somaliland Scots, waxaanu ka noqday karaani buuxa. intii u dhaxaysay sanadihii 1957 ilaa 1958-kii wuxuu la shaqeeyay Sarkaalkii Mustacmarada Ingiriiska u qaabilsanaa Hawd iyo Raseef Area dhulkii la odhan jiray, xiligaas shaqada Marxuum Cabdi Xassan Buuni waxay ahayd Karaani. taariikhdu markay ahayd 15-kii Bishii November sanadkii 1958-kii waxa uu noqday xisaabiyaha guud ee Magaalada Hargeysa.
Sanadkii 1960-kii waxa uu marxuumku xubin ka noqday Baarlamaankii ugu horeeyay ee loo doortay Somaliland. Midowgii labadii dal ee Somaliland iyo Somaliya gaar ahaan 1-dii bishii july 1960-kii waxa uu marxuum Cabdi Xassan Buuni noqday Ra-iisal wasaare ku-xigeenkii ugu horeeyay ee dawladii Somaliya. Sanadkii 1964-kii ayaa mar kale loo doortay jagadii baarlamaanka Somaliya.
Taariikhdu markay ahayd intii u dhaxaysay sanadihii 1965 ilaa 1968-kii waxa Marxuumku noqday waxa loo magacaabay Maareeyaha guud ee Shirkada Muuska ee Gobolka Shabeelaha Hoose, xarunteeda magaaladda Marka. 1982-kii ilaa 1984-kii wuxuu ahaa gudoomiyaha Shirkada Ganacsiga ee Agro Industureil Company (AITCO) oo taas oo ahayd mid uu isagu aasaasay. Intii u dhaxaysay sanadihii 1985 ilaa 1991-ka wuxuu ahaa gudoomiyaha Shirkada Kaluumaysiga ee (AFCO).
Sanadkii 1995- ilaa 1997-kii waxa uu noqday Gudoomiye ku-xigeenka Gudidii nabadaynta Somaliland. Bishii July 2003-dii ayaa Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin waxa uu u doortay inuu dawladiisi uu markaa soo dhisayay ka qabto jagada wasiirka wasaaradda Xidhiidhka golayaasha taas oo uu ka hayay ilaa imika oo geeridu u timiday. Marxuumku intii uu ifka joogay waxa uu guursaday laba dumar ah, kuwaas oo Rabi kala siiyay caruur tiradoodu gaadhayso 15-qof, waxaana caruurtiisa iyo intay sii dhaleen marka la isku geeyo ay sii cagacagaynaysaa ku dhawaad 36-qof.
Rabi Nacariistii jano ha ka waraabiyee, waxa uu Marxuum Cabdi Xasan Buuni Si wanaagsan ugu hadli jiray afafka Ingiriisiga iyo Carabiga iyo waliba luuqada Somaliga oo ahayd afkiisa hooyo.
Marxuumka maaha intani taariikh nololeedkiisi oo dhamaystiran balse waa qayb ka mid ah inta laga xasuusto, waxaanan hadaanu nahay bahda Maalmaha aanu idiin balan qaadaynaa inaanu wixii kale ee aan ka helno taariikhda Marxuumka idiin soo gudbin doona. dhamaan maamulka, Hawlwadeenada iyo wariyayaasha ka hawl Gala Shabakada Wararka ee Harowo.com iyo Wargeyska Maalmaha, waxaanu anagoo ka tiiraanyaysan geerida Marxuumka ka tacsiyadaynaynaa Qoyskii Qaraabadii iyo dhamaan shacbiga Somaliland ee uu ka baxay marxuum Cabdi Xassan Buuni, waxaanan Marxuumka Alle uga baryaynaa inuu naxariistii jano ka waraabiyo, dhamaana samir iyo iimaan inaga siiyo aamiin.
Inaa Lilaa Wa Inaa Ilayhi Raajacuun
This entry was posted on June 3, 2009 at 9:48 am	and is filed under News (Warka). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.